mushaTURKEYDunhu reMarmara54 SakaryaNational Railway Work kuTwayVASAŞ
13 / 01 / 2020 54 Sakarya, Railway, GENERAL, masangano, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Tüvasas, TURKEY
tuvasasta yenyika chitima chinjana
Turkey Wagon Industry Inc. National Electric Train mushandirapamwe kwakatangwa. Iyi fekitori ichasimudzira basa rayo uye vashandi vange vachizoshanda nemugovera. Chitima chenyika chakarongwa kuve mumatanho pakupera kwaJune kana Chikunguru.
Turkey Wagon Industry se (TÜVASAŞ), makambani wokumwe iyo ine zivo Diesel nechitima dzakatevedzana kugadzirwa pasi rezenisi, zvichiitirwa kushandiswa pakugadzira National yemagetsi chitima pazvinhu.
National magetsi emagetsi echitima akateedzera emakiromita 160 paawa mukati mechikamu chekugadzirwa kweiyo prototype inotarisirwa kupedzwa pakati pegore rino uye mota iri kurongwa kuendeswa kune rair.
Izvo zvinofano fungwa kuti nzira yekubvunzira uye yekuferefetwa yenyaya dzino dzechitima ichange yapera mukupera kwegore uye kugadzirwa kwechipiri kunotanga.
Pamusoro pezvo, iyo yenyika yemagetsi chitima yakatevedzana yakagadzirwa uye yakakwirira yechitima masheti yakatangwa kuve yakagadzirwa zvichiteerana nemamirimita mazana maviri nemashanu paawa kuti ishandiswe muzvidzidzo zveR & D.
Basa rekugadzira remagetsi emunyika rinopedzwa gore rinouya.
TUBITAK ichabatanidza mabasa eR & D eprojekiti uye kukudziridza zvikamu zvakakosha pazinga re prototype. Kugadzirwa kwehukuru hwemagetsi emunyika kunoitirwa kuti itange muna 2022 uye yeiyo yepamusoro sitima yenyika yakakwira muna 2023.
National chitima chemagetsi chinorova mathava muna 2020
Elektrikli Isu tinoona isu njanji seimwe yehukosha hwakakosha hwekusimudzira budiriro inofamba, Cah akadaro Cahit Turhan, Gurukota rezvekutakura kwezuva reNational Electric Sitima.
Mehmet Cahit Turhan akati, tik Tave tichishanda nesimba kumutsiridza nzvimbo iyi isina kuraswa kwemakore. Tichitungamirwa neMutungamiriri wedu, isu takadzosera njanji dzedu kudzoka kuva mamiriro enyika. Isu takavandudza mitsara mikuru yese muyavo iripo 11 km njanji network. Mukati megadziriro yezvirongwa zvepamutemo zvatakaita, tavhura njanji kune yakazvimiririra. Isu takagadzirira hwaro hwepamutemo hwekufambisa kwevatakuri uye nevapfuuri nevezvitima zvakazvimirira zvevazvimiririri vega vega pane yedu njanji network. 590. Isu takaita 1 kilometres eimhanya-yakakurumidza mutsetse.
Inenge mamirioni 52 nzendo dzinoitika pane Ankara-Eskişehir-Istanbul, Ankara-Konya-Istanbul nzira. Isu ikozvino tinogadzira chakakoshesa chikamu chekumhanya kwezvinhu zvekushandisa mune yedu nyika. Isu takagadzira iyo yenyika yekutakura ngoro, tinoishandisa. Muna 2020, isu tine chinangwa chekutakura vapfuuri mamirioni mazana mapfumbamwe nemapfumbamwe neYHT.
TCDD Transportation Co Mamirioni mazana matatu nemakumi matatu nematatu, mazana mashanu emakumi mashanu ematani nevashandi vezvitima zvevashandi vega vega, kusanganisira huwandu hwematani mazana matatu nemakumi manonwe nemakumi matatu Marmaray inotarisira kutakura vanhu vanosvika zana nemakumi mana emamiriyoni muna 29,3.
Tinotarisira huwandu hwemamirioni gumi nemana nemazana matanhatu hwevatakuri kutakurwa muBaşkentray. PaTÜVASAŞ, isu tichaderedza fomu rekutanga reNational Electric Train Set kumaraini muna 14,6 tobva tatanga kugadzira huwandu. ” (Medyab ndiye)
Asphalt Kushanda muKagı Municipality
European Work for Ski Resorts muErzurum
112 Emergency Intensive Basa muUludag
Marmaray Temenye Höyüğü inotanga kushanduka kwayo
Ordu Cable Car Inoita Kuti Shift Shift
Mutungamiri weChiedza kubva kuIZBAN
Trolleybus Kushanda muManisa Metropolitan
Kuguma kwechitima kwakamira iyo injini ikamira
Mutungamiri Kocaoğlu'nun Capital Mesaisi Yakanyatsopfuura
Usiku Uchidzidzisa kuKonak Tram
Kuchinja kweAsphalt kunopfuurira mu Çorum
Electric National Chitima
yenyika yemagetsi chitima kugadzirwa
High Speed ​​Speed ​​Train Sets